Kiobà: Votsotra i Rodiles Mpisolovava Ny Demaokrasia; Mbola Voatàna ilay Bilaogera Diversent · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2012 22:58 GMT
Juan Wilfredo Soto García [es], bilaogera sady mpisolovava mpiaro zon'olombelona, dia nitatitra fa ireto bilaogera sy mpisolovava mpiaro zon'olombelona manaraka ireto dia niara-voasambotra tamin'izay fandraofana faobe izay : Yaremis Flores, Laritza Diversent, Veisant Boloy, Antonio G. Rodiles, Ailer González, Andrés Pérez, Mario Morales, Vladimir Torres, Rolando Reyes, Reinaldo Figueras y Luis Manuel Fumero, Yoani Sánchez, ary Guillermo Fariñas Hernández. Maro, ka isan'ireny ry Sánchez, no voatazona nandritra ny fotoana fohy monja, saingy i Rodiles, Diversent, sy ireo hafa dia nijanona notanan'ny polisy nandritra ny andro maro.
Ireo mpampiasa Twitter [es] dia nitatitra fa fotoana fohy taorian'nynitazonana azy i Rodiles dia nanomboka fitokonana tsy hihinan-kanina. Tsy nanome antny ofisialy amin'ny namotsorana azy ny polisy, saingy mety ho isan'ny nanosika ny fanapahan-kevitry ny manampahefana mikasika ilay olana io nataony io.
Na i Diversent, na i Rodiles, dia samy lasa olona malaza eo amin'ny samy bilaogera sy mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona ao Havana. Hatramin'ny 2010 no nikarakara ny Estado de SATS i Rodiles, andianaà fifanakalozan-dresaka misokatra ho an'ny rehetra mikasika ny hoavin'ny politka sy ny fiarahamonina sivily ao Kioba, izay ikendrena ny hanomezana “habaka ho an'ny fifanakalozan-kevitra sy fandraisana anjara marolafy izay fehezin'ny fifanakalozana mivelatra sy am-pahamatorana.” Nandritra ireo taona vitsy lasa, ny Estado de SATS dia lasibatry ny fanakianana tsy mitsahatra avy amin'ireo manampahefana avy amin'ny governemanta izay manamafy ny filazàny an'ilay fandaharana ho “manohitra ny revolisiona.”.
Luis Felipe Rojas, bilaogera, dia nandefa vinavina sarotra hamarinina [es] hoe ny fisamborana an'i ì Rodiles dia valin'ny “The Citizen Demand for Another Cuba,” [es] (Ny Fitakian'ny Olom-pirenena Hisian'ny Kioba Iray Hafa) fehin-kevitra iray nosoratana sy naelin'i Rodiles ary misokatra ho azo soniavina eto[es].
Nahazo toraka vononkazo, i Yoani Sanchez, bilaogera, dia nanoratra lahatsoratra masiatsiaka [es] manoritsoritra ny valinkafatra feno fihetsehampo avy aminy momba ny fitazonana an'i Rodiles:
Soto García dia nanoratra [es] fa nahita fa ampahany amin'ny hetsika goavana be ataon'ny governemanta amin'ny vahoakany ireo fisamborana ireo. Nomarihany fa raha mahazo setriny miabo avy amin'ny any ivelany ny governemanta avy amin'ireo politika vaovaony momba ny fivezivezena, dia sady nandray ihany koa fepetra henjana hamelezana ireo mitaky ny fiovàna goavana ho an'ny sivily sy ny ara-politika.
Ireo tatitra teo aloha nataon'ny Global Voices momba ny Estado de SATS dia azo jerena eto, eto, sy eto.